Tottenham ayaa qarka u saaran inay heshiis amaah ah kula soo wareegto Gareth Bale oo ku caajisay kursiga kaydka kooxda Real Madrid.
Bale, oo 31 jir ah, ayaa ka tagay Spurs kuna biiray Real sannadkii 2013 isagoo dhaliyay 56 gool 203 kulan oo uu saftay 6 sanno oo uu la joogay kooxda.
Sida laga soo xigtay Sky Sports, Bale ayaa ka sugaya Madrid inay iftiinka cagaaran siiso si uu ugu duulo caasimada England oo ay kooxdiisi hore ka dhisan tahay.
Wakiilka ciyaaryahanka reer Wales Jonathan Barnett ayaa yidhi: “Waxaa jira waddo dheer oo loo maro arrimaha qaar, laakiin shaki la’aan Gareth ayaa ku dhow inuu ka tago Madrid marka loo eego waqti kasta oo ka mid ah 7-dii sanno ee la soo dhaafay.
“Heshiiska waa mid ad-adag, laakiin waxaa jira sabab aan ku aamino inuu dhow yahay oo ay wax waliba dhakhso u dhaqaaqi karaan hadii wada hadalada ay si wanaagsan u socdaan.”
Iyadoo Bale uu u muuqdo inuu kuso jeedo London, labada ciyaaryahan ee Danny Rose iyo Dele Alli ayaa laga yaabaa inay kooxda ka baxaan.
Rose, oo 30 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu ku biiro Genoa ka dib markii laga iloobey lambarka kooxda, halka Alli aan lagu darin qorshaha Jose Mourinho ee kulanka isreeb-reebka Europa League ee ay caawa la ciyaarayaan Lokomotiv Plovdiv.
Sida laga soo xigtay The Mirror, kooxda Serie A ka dhisan ayaa wadahadalo horumar leh kula jirta Spurs waxayna u furan yihiin heshiis joogto ah maadaama amaah ay kula soo wareegeyso ay u muuqato mid aan macquul aheyn iyadoo Rose kaliya hal sanno ay uga hadhsan tahay qandaraaskiisa.
Daafacan bidix ayaa amaah lagu siiyay Newcastle bishii January laakiin waxay iska diideen inay si rasmiya u iibsadaan dhammaadka xilli ciyaareedkii hore.
Alli oo 24 jir ah, ayaa loo tixgelinayaa inuu yahay macaaneeye ka dhaqaaqi kara kooxda Tottenham si ay dib ugu soo ceshato Bale.
Laakiin Daily Mail ayaa sheegaysa in ciyaaryahanka khadka dhexe ee England ay u muuqato inay u badan tahay in amaah lagu geeyo kooxaha mudada dheer xiiseynayay ee Paris Saint-Germain ama Inter Milan iyagoo isku dayaya inay dib u xoojiyaan xirfadiisa.
The Sun ayaa qortay Rob Holding inuu diyaar u yahay inuu iska diido heshiis amaah ah isla markaana uu u dagaallamo booskiisa Arsenal.
Holding,oo 24 jir ah ayaa kusoo bilawday kulankii furitaanka ee Gunners ay guusha wayn ka gaadhay Fulham xilli uu David Luiz oo booska lihi uu dhaawac ku seegay ciyaarta.
Holding ayaa sidoo kale ciyaaray 90-ka daqiiqo oo buuxa iyadoo kooxda Mikel Arteta ay kor u qaaday koobka Community Shield kulankii ay guusha ka gaadheen Liverpool.
Hadana taasi ma joojin wararka la isla dhexmarayo ee sheegaya in ciyaaryahankii hore ee Bolton lagu wado inuu ka baxo Emirates.
West Ham ayaa lala xidhiidhinayay daafacan khadka dhexe laakiin waxa uu doonayaa inuu is muujiyo oo awoodiisa difaaceed bannaanka keeno.
Sida laga soo xigtay Daily Express, Gunners ayaa xoojineysa dadaalkooda ku aadan saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lyon Houssem Aouar.
Agaasimaha farsamada Edu ayaa la hadlay wakiilada ciyaaryahanka iyadoo heshiiska shaqsiga ah aan weli la aqbalin.
Ilo wareedyo kala duwan ayaa sheegaya in Chelsea ay u adeegsan karto Fikayo Tomori inay heshiis kula soo wareegto goolhayaha Rennes Edouard Mendy.
Blues waxaa ka go’an inay gacanta kusoo dhigto Mendy si uu ugula tartamo Kepa Arrizabalaga booska 1-aad ee goolhayaha garoonka Stamford Bridge.
Laakiin waxaa laga yaabaa inay haatan u ogolaadaan Tomori oo 22 jir ah inuu ugu biiro kooxda reer France amaah hal xilli ciyaareed si loo hubiyo inay la soo wareegaan goolhayahan xirfada leh.
The Standard ayaa sheegaysa in Everton ay xiiseyneyso soo qaadashada Tomori, kaasoo hoos uga dhacay beddalka labaad ee daafaca dhexe ee Chelsea ka dib imaanshaha Thiago Silva.
Inkasta oo uu ilaa haatan diiday in uu ka hadlo wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan daafaca dhexe ee da’da yar , hadana tababaraha Toffess Carlo Ancelotti ayay ka go’an tahay inuu xoojiyo daaficiisa.
Previous PostAqoonyahanka iyo Waxgaradka Gobolada Bariga Somaliland Oo Si Cad uga soo Horjaystay in Madaxwayne Biixi Mar-labaad Noqdo Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Next PostXamaas iyo israa’iil oo madaafiic isku waalay iyo xiisadda Qaza oo kacsan